Seagate File Iweghachite - naghachi faịlụ site Seagate mpụga ike mbanye
Download " Download
Enyemaka! Echefuola data si Seagate diski ike!
M na mberede ehichapụ niile ochie faịlụ na m Seagate mpụga ike mbanye; M mkpa n'ezie iji naghachi ndị faịlụ, ezi ihe ọ bụla aro?
Dị ka nnukwu soplaya nke dijitalụ nchekwa n'ụwa, Seagate raara ka mpụga ike mbanye na elu àgwà na ikike n'ihi na ụlọ ọrụ na ndị nkịtị, na ọtụtụ ndị na-ahọrọ ya. Otú ọ dị, Seagate mpụga ike mbanye nwe nwekwara ike izere data ọnwụ ọdachi ruru mara na-amaghị ihe.
Olee otú ịrụ Seagate faịlụ mgbake
The faịlụ ị na-eche na ha na e furu efu ruru ka ihichapụ ma ọ bụ formatting bụ n'ezie ka ebe gị disk. N'ihi na ohere na faịlụ ogide bụ naanị akara dị ka "dị ka iwerekwa" na faịlụ na-apụghị ịhụ anya. Na a ọkachamara Seagate data mgbake, ọ bụ nnọọ mfe inwe ha niile azụ. Ozugbo izute a, ihe ị ga-eme nke ahụ n'oge mbụ na-ịkwụsị Dee nke ọhụrụ data n'ime gị disk, ma ọ bụ nke furu efu data ga-overwritten.
Ịrụ a Seagate ike mbanye mgbake, anyị ga-amasị ịme ka ị na Wondershare Data Recovery maka Windows ọrụ, n'ihi na Mac ọrụ, Wondershare Data Recovery for Mac (maka Mavericks). N'agbanyeghị faịlụ na-efu ruru virus agha, guzobere, nrụrụ aka, nhichapụ ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na ha na-agaghị ahụ mebiri emebi, a usoro nwere ike inyere iji weghachite ha niile ọsọ ọsọ na n'enweghị.
Free download nri version nke data mgbake, wụnye na-agba ya na kọmputa gị. Ebe a ka na-na Windows version na zuru ezu nzọụkwụ n'okpuru.
Mgbe ihe omume ulo oru, ọ na-aga Ọkachamara mgbake mode ka ndabere, ebe ị na mkpa iji zaa ajụjụ abụọ dị mfe ịrụ gị Seagate faịlụ mgbake. Nke mbụ bụ na-ahọrọ ụdị nke faịlụ na ị chọrọ iji weghachite si draịvụ ike gị. BTW, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na Standard ọnọdụ, ị nwere ike nweta otu agbake N'ihi site n'ịhọrọ "Echefuola File Iweghachite". Ma Ọkachamara mode na-atụ aro.
Nzọụkwụ 2 Họrọ mpụga mbughari ngwaọrụ
Ahọrọ "Mpụga mbughari ngwaọrụ" dị ka isi iyi disk maka data mgbake, na-anọgide na-"Ekem".
Rịba ama: Mgbe mmalite scanning, ego "Kwado Deep iṅomi", nke nwere ike inyere gị aka ịchọta azụ furu efu faịlụ ọzọ kpamkpam.
Nzọụkwụ 3 Preview na-agbake data si Seagate
Mgbe scanning completes, ndị niile recoverable faịlụ na-depụtara na scanning n'ihi na ụdị faịlụ. Ịnwere ike ihuchalu ha otu otu na ego ndị ị chọrọ iji naghachi.
1. Tupu agbake, i nwere ike iji "iyo" ịchọ gị mkpa faịlụ aha iji chọta ya ma ọ bụrụ na e nwere nza nke faịlụ scanned si. Ọ nwere ike ịzọpụta gị oge dị ukwuu.
2. Mgbe Echekwara natara faịlụ, cheta na-azọpụta ha na kọmputa gị ike mbanye ma ọ bụ ọzọ mpụga mbughari ngwaọrụ, ma ọ bụghị Seagate ike mbanye ebe ị furu efu gị data, n'ihi na mma-atụle.
Video nkuzi nke Seagate faịlụ mgbake
Olee otú Naghachi SSD Data
Olee otú Igosi SimpleTech Data Recovery
Asus Data Recovery: Olee naghachi Data si Asus laptọọpụ
> Resource> Naghachi> Esi Back faịlụ site Seagate mpụga ike mbanye